Trilogy yeWhite City, mhosva yekuparwa kubva kuVitoria | Zvazvino Zvinyorwa
La White Guta Trilogy akateedzana akagadzirwa nemunyori wechiSpanish munyori Eva García Sáenz de Urturi. Ese ari matatu mabhuku anga ari yakaiswa kumusha kwemunyori (Vitoria, valava). Kunyangwe hazvo vakatengeswa mukati memhando yenyaya yematsotsi, kuvandudzwa kwezvirongwa zvavo zvinoenderana neizvo zvetikitivha.
Iwo mazita esaga akaburitswa pasi pechisimbiso cheWedhiyo Planeta uye apfuura mamirioni emakopi akadhindwa akatengeswa kusvika nhasi. Neichi chikonzero, Munyori weVitorian anoonekwa semunyori aine chinetso chikuru muSpain nhasi. Hazvishamise kuti, mu2019 yekutanga yekutanga yeiyo trilogy (Kunyarara kweguta jena) yakaunzwa kuchiridzwa chikuru.
1 Nezve munyori, Eva García Sáenz de Urturi
2 Iyo trilogy
3 Chinyararire cheWhite City (2016)
4 Iwo maRites eMvura (2017)
4.1 Unhu shanduko
5 Nguva Yekutenda (2018)
5.1 Kukura mupfungwa kwaUnai
6 Iko kugona kwekuvhara saga
Nezve munyori, Eva García Sáenz de Urturi
Akazvarwa muVitoria, Álava, muna 1972. Akagara muAlicante kubvira pakati-80s. Kubva achiri mudiki, airatidza kufarira kwake kuverenga, kuda - mumashoko emunyori - akagara nhaka kubva kuna baba vake. Ane degree mu optics uye optometry, aine basa rakakura mumunda. Akashandawo kuYunivhesiti yeAlicante uye mudzidzisi anozivikanwa.
Eva Garcia Saenz de Urturi zvine mutsindo akatanga basa rake rekunyora pamwe nekuzvishambadza paAmazon e Saga rekare mukati megore ra2012. Basa iri rakagamuchirwa neruzhinji paInternet, izvo zvakatungamira kuburitswa kwaro naEssera de Libros. Kubva 2013 akaburitsa nePlaneta. Pamberi pe White Guta Trilogy (2016 - 2018), rakaburitsa maanovels maviri (ese ari maviri kubva 2014):
Iyo Saga yeiyo Yakagara-Kurarama II: Vanakomana vaAdamu.
Passage kuenda kuTahiti.
Kubva kumberi mutsara we Kunyarara kweGuta Chena, munyori anokwanisa kubata muverengi kuburikidza neakajeka nhoroondo yake uye zvinogara zvichishamisa. Kusimba kwakadaro kunoenderera zvakanyanya kuoneka mubhuku repiri, Iyo mvura inogadzirira. Nekudaro, mamwe mazwi ekutsoropodza - akadai saCarmen del Río anobva pasuo Iye Akaipa Anofamba- Ivo vanonongedza kuti "yekupedzisira yemabhuku haimhanyi zvakanyanya."
Chinhu chakasarudzika cheiyo trilogy iko kutandara kwenzvimbo dzekufananidzira dzeguta reVitoria, uko kune chikamu chakanaka chezviitiko chinoitika. Muchokwadi, nekuda kweiri basa, munyori akaonekwa (nesarudzo yeredhiyo vateereri) neCadena Ser de Álava 2017 Mubairo.
Idzo tsananguro yenzvimbo yenhoroondo yeVitoria yakanyatsotsanangurwa uye yakanyatsojeka. Nenzira imwecheteyo, zvakajairwa tsika dzenharaunda dzinomiririrwa zvakanaka. Zvakare nekusarudzika kwemazita emakomboni - akajairika mu Álava- yakatorwa mukubatanidzwa pakati paterfamilias nenharaunda yekwakabva (López de Ayala, semuenzaniso).
Kunyarara kweGuta Chena (2016)
Guta reVitoria rinozungunuswa nehurongwa hwekuuraya kwevakaroora vane makore anopera muzvakawanda zve5. Uye zvakare, mitumbi yevakakuvadzwa inoonekwa munzvimbo dzinozivikanwa muguta, dzakasiiwa munzvimbo dzinomutsa imwe mhando yechiratidzo. Iyi modus inoshungurudza modandi inobata kutarisisa kwakazara kweInspector weCriminal Investigation Division yeVitoria, Unai López de Ayala, anonzi "Kraken".
Muongorori ane zita rekuti cephalopod remadunhurirwa inyanzvi yekutsvaga vanopara mhosva. Asi mukuferefeta uku kunoda rutsigiro rwakawedzerwa, nekuti nzira dzemhondi dzinoda zivo chaiyo yetsika dzekare. Neichi chikonzero, iye Kraken anotendeukira kune ane nharo archaeologist (akambotongerwa kumwe kufa) kuitira kuti anzwisise zviri nani mamiriro erufu.
Kunge yakanaka yakavanzika novel ine mutikitivha, hunhu hukuru hune hunhu uye hunoshamisa. Inspector Unai López de Ayala akawana zita rake remadunhurirwa (Kraken) nekuda kwenyaya mbiri dzisina chokwadi. Kutanga, muviri wake unokatyamadza wakasangana nehunhu hwepagmatic, husinganzwisisike kune vazhinji veavo vakamukomberedza.
Chechipiri, hunhu hwesimba hunomutungamira kuti agadzirise mhosva dzakaomarara, nekuti "hapana munhu anopfuura matende ake makuru." Zvakare, haazeze kuganhura miganho yezvakanaka mutsika kugadzirisa nyaya. Mukupesana, iye co-nyeredzi (anowanzo kutsamwiswa nehunhu hwaKraken husina kujairika) munhu ane pfungwa zvakanyanya, Assistant Commissioner Alba Díaz de Salvatierra.
En Iyo mvura inogadziriraEva Garcia Saenz de Urturi inoongorora psychology yevatambi vakakurumbira apo ichipa gadziriso yenyaya nyowani. Iyo rondedzero yakakamurwa kuita mbiri nguva, 1992 na2016. Muna 1992 hukama pakati paKraken nemusikana wake wekutanga, Ana Belén Liaño, hunorondedzerwa. Ndiani angave wekutanga ane nhumbu (mu2016) yemhondi yekuuraya uyo (sezviri pachena) anotevedzera tsika yaiitwa makore 2500 XNUMX apfuura.
Ana Belén akawanikwa akarembera akatarisa pasi, akanyudzwa mumudziyo wakambobiwa kubva kumuseum mu Santander. Saka, kuti unzwisise tsaona dzakaitika panguva ino, zvakafanira kuziva kuvakwazve kweguta reCantabrian muna 1992. Kraken, wake wekare, Muzvinafundo Raúl naRebeca (mwanasikana wapurofesa) vakapinda mubasa iri. Chingave basa rakaratidzirwa nechitarisiko chinotyisa cheye mudiki comic bhuku muimbi.
En Iyo mvura inogadzirira divi rinonyanya kunetsekana remunhu mukuru rinowoneka. Nekuti iyo mhondi yakabatana neyakare yaKraken uye inoteedzera vakadzi vane nhumbu. Kutya kwake kwakakodzera nekuti Deputy Commissioner Alba anogona kuve nepamuviri naye (izvo zvinogona kumuita chinangwa). Kutya kwese kunowedzerwa nekushungurudzika kwakapfuura kuna Unai, uyo akatambura kufa kwevabereki vake achiri mudiki.
Mupiro wevatambi vechipiri (senge mumwe wake Esti kana sekuru vaKraken, semuenzaniso) zvinosvika pakuve zvakakosha pamhedzisiro. Naizvozvo, mukuvandudzwa kwegakava hapana ndima dzisina kukodzera kana dzakasarudzika. Pane kupokana, zvese zvese - kunyangwe zvingaite sezvisingakoshi - zvinokodzera mukati mechisimba uye chinoshamisa chirongwa chakagadzirwa nemunyori.
Zvakafanana nerondedzero ye Iyo mvura inogadzirira, in Iwo madzishe enguva zvinoitika mumitsara yenguva miviri. Yekutanga (mune ino), inotsanangura kugadziriswa kwenyaya yekupondwa kwemuzvinabhizimusi mumamiriro ezvinhu akafanana neaya enoverengeka yave kuda kutangwa. Yechipiri ndeye mhando yenhoroondo yenhoroondo kubva kuMiddle Ages inonzi Iwo madzishe enguva.
Kukura mupfungwa kwaUnai
Eva García Sáenz de Urturi anoratidza ese mativi erwendo rwemukati rwaUnai. Anoenda kubva pakuva anotyisa hunhu pakutanga kwesaga, kuenda pakuva munhu anofunga uye akasimba pamoyo. Iko kufungidzira kweakakura uye ane hukasha mukomana, iye anochinja kuva murume anokoshesa mhuri kupfuura zvese. Mukupedzisira, protagonist inokwanisa kukoshesa zvakanyanya vanhu vakamukomberedza.
Iko kugona kwekuvhara saga
Kunyangwe paine mukana unooneka pakati penguva, Iwo madzishe enguva inova iko kuvhara kwakakwana kweiyo trilogy. Nekuti pakupedzisira kubatana kwacho kunosimbiswa pakati pezvose zvirevo zvakaitika kubva ipapo Kunyarara kweGuta Chena uye mhuri yaUnai. Zvinoenderana neiyo peji Reader kune Reader (2018), munyori anosiya "tambo dzese dzakasungwa zvakanaka, zvisinei kuti zvingawoma sei dzimwe nguva".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » White Guta Trilogy